ဦးပိုင်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးအပေါ် ချုပ်ကိုင်ထားမှု | MoeMaKa Burmese News & Media
နိုင်ဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၂
၁။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ထိုအချိန်က န၀တ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက် ရေးအဖွဲ့) အစိုးရ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လီမီတက် (The Union of Myanmar Economic Holdings Limited) ကို ၁၉၅၀ ခုနှစ် အထူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းကြောင်း အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၇/၉၀ ဖြင့် ကြေညာခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့၊ အာဏာသိမ်းပြီး နောက်ပိုင်း တပ်မတော်ကတည်ထောင်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
မြန်မာစီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်အောက်ရှိ စက်ရုံများတွင်လည်း ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးများ၊ ဗိုလ်မှူးကြီးများ စက်ရုံမှူး အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် အကျိုးအမြတ်ရရှိသောစက်ရုံများ ရှိသကဲ့သို့ နှစ်စဉ်အမြဲတမ်း အရှုံးပြနေ သော စက်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းများလည်း များစွာရှိသည်။ အရှုံးပြရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းများမှာ စက်ရုံလုပ်ငန်း များအတွက် နိုင်ငံခြားမှတင်သွင်းလာသော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများမှာ အရည်အသွေးမှီသော်လည်း ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ရောက်ရှိလာပြီဆိုသည်နှင့် နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းလာသည့် တာဝန်ရှိသူများနှင့် စက်ရုံမှူးများ လက်ဝါးချင်းရိုက်ကာ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်းသို့ ပို့လိုက်ကြပါသည်။ အရည်အသွေးပြည့်မှီသော ကုန်ကြမ်းများအား အရည်အသွေးညံ့သည့် ကုန်ကြမ်းများနှင့် အစားထိုးလိုက်ပါတော့သည်။ ပလပ်စတစ်ရက်ထည်အိတ်စက်ရုံနှင့် ပလပ် စတစ်လူသုံးကုန်စက်ရုံများဆိုလျှင် နိုင်ငံခြားမှ အရည်အသွေးမှီကော်စေ့များအား ရောင်းစားပြီး လမ်းဘေးတွင် စွန့်ပစ် ထားသော ပလပ်စတစ်အဟောင်းများ ၀ယ်ယူ၍ ပြန်လည်အသုံးပြုသည်ပင် ရှိပါသည်။ စက်ရုံမှူးများသည် အရည် အသွေးမှီကုန်ကြမ်းများ ရောင်းစားရသည်ကိုပင် အားမရသေးဘဲ စက်ရုံမှထွက်ရှိသည့် ကုန်ချောပစ္စည်းများကိုပင် အောက်ခြေ၀န်ထမ်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ခိုင်းရောင်းလိုက်သေးသည်။ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး (QC) အဖွဲ့အား စက်ရုံမှူးများမှ ညှိထားပြီးဖြစ်သည်။
၂၀။ မူလက တပ်မတော်နှင့်တပ်မတော်သားများအကျိုးအတွက်ဟုပြောဆိုကာ ဖွဲ့စည်းခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့ တွင်မူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့်၎င်းတို့မိသားစု ဆွေမျိုးသားချင်းတစုသာ ကုဋေကြွယ်သူဌေးကြီးများ၊ ဇောတိကများ ဖြစ် သွားစေခဲ့ပြီး အောက်ခြေရဲဘော်အများစုမှာ အများပြည်သူနည်းတူ ဆင်းရဲမွေတေမှုများနှင့်သာ နပန်းလုံးနေကြရပေ သည်။ သာမန်တပ်မတော်အရာရှိများ၊ စစ်သည်များ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းများနှင့် ပြည်သူလူထုနှင့် ရဟန်းသံဃာ တော်များ အမှန်တကယ်ကျောင်းသင်္ကန်းဆောက်ရန်၊ အိမ်များဆောက်လုပ်ရန်၊ နေအိမ်ဆောက်လုပ်ခွင့်များ ပါမစ်များ ဖြင့်ဘိလပ်မြေလျှောက်ထားသော်လည်း အလွယ်တကူရရှိခြင်းမရှိ။ ဆင်မင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံ၏ သွင်းဈေးမှာ (၃၀၀၀) ကျပ်သာ ဖြစ်သော်လည်း ပြင်ပဈေးနှုန်းမှာ (၄၀၀၀) မှ (၄၅၀၀) ကျပ်အထိ ရှိသည်။ ၎င်းဈေးနှုန်းများမှာ ဘိလပ်မြေပွဲ စားများမှ စက်ရုံတွင်ဝယ်ယူသော ဈေးနှုန်းဖြစ်ပြီး ပွဲရုံသို့ရောက်ရှိပါက ကျပ် (၅၀၀၀) မှ (၅၅၀၀) ကျပ် အထိ ရှိသည်။ အခွင့်ထူးခံတပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့် မိသားစုဝင်များ လျှောက်ထားပါက အနည်းဆုံး အိတ် (၃၀၀၀) မှ အိတ် (၅၀၀၀၀) ထိ ရရှိကြသည်။ ထိုမျှမကသေး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးတို့၏ တပည့် များ ဖြစ်သော အိမ်တော်ပါသက်တော်စောင့်အရာရှိများနှင့် စစ်သည်များအား လစဉ် တဦးလျှင် အိတ်(၁၀၀၀) နှုန်း ထုတ်ယူခွင့်ပြုထားပါသည်။
၂၁။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲမှ တက်လာမည့် ဘောင်းဘီချွတ် အရပ်ဝတ် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ သာ ကြီးစိုးသည့် အစိုးရသစ်အနေဖြင့်လည်း ရာသက်ပန်တပ်မတော်ထိပ်သီးကြီးနေရာမှာ စိုးမိုးနေရာယူထားသည့် တပ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေနှင့်ဒုတပ်ချုပ်ကြီးမောင်အေးတို့၏ အာဏာစက်အားမလွန်ဆန်နိုင်သဖြင့် ၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွား များနှင့် တသားတည်းဖြစ်နေသည့် ဤဦးပိုင်ကုမ္ပဏီကြီးကို အသက်နှင့်ရင်းကာ ကာကွယ်ကြပေဦးမည်မှာ မြေကြီး လက်ခတ်မလွဲ ဖြစ်ချေသည်။ သို့သော် လွှတ်တော်(၃)ရပ်တွင် တက်ရောက်လာမည့် အရပ်သားလွှတ်တော် အမတ် များအနေဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးအပေါ် ဦးပိုင်နှင့်စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့၏ စီးပွားရေးချယ်လှယ်လွှမ်းမိုးမှုအား မေး ခွန်းများထုတ်မှာကို မလွဲဧကန်ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မေးခွန်းများကို မဖြေနိုင်ပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ များနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ဦးပိုင်အတွင်း ငွေကြေးရှုပ်ထွေးမှုပြဿနာဂယက်ကြီးမားလာပါက တပ် မတော်အတွင်း ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
၂၂။ တပ်မတော်တွင်း က အောက်ခြေရဲဘော်များနှင့်ပြည်သူ လူထုအဖို့မူ ပြည်သူတို့သွေးချွေးများဖြင့် ပေကျံနေ သော ဤစစ်တပ် ဦးပိုင်လီမိတက်ကြီးကို မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းရပေဦးတော့မည်။
3 Responses to ဦးပိုင်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးအပေါ် ချုပ်ကိုင်ထားမှု
mapyawmapee/mateema-myee on December 2, 2012 at 8:13 pm
have been stealing from own people and own country.
very disgusting and nauseating.
we all should be ‘ bitter and twisty ‘ of this government and theirs.
အကီး on December 3, 2012 at 4:15 am
ဆရာကီး ဆုတေသီး မောင်တင့်တယ် ပြောတာအားကီးမှန်တယ်။ ဥပိုင်က မရောင်းရင် ၀တို့ ဘယ်ဝယ်လို့ ရမလည်း။
ဈေးကွကြီးပွားရေးစံနစ်မှာ ရောင်းဆူရှိရင် ၀ယ်ဆူရှိမှာဘဲ။ ဆူခိုးတွေ ထားပြတွေလာရောင်းတာလား ၀တို့ ဘယ်သိမလည်း။ ဈေးချိုတယ်ဆို ၀တို့ ဝယ်တာဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ ဘိန်းတော့မ၀ယ်ဘူး၊ ဒါတော့ကြောက်တယ်၊
ပြည်ကီးမှာသေဒါဏ်ပေးတာဘဲ။ ဒါနဲ့ လူ့တို့ တိုင်းပြည်က ဒီနှစ်မှာ ဘိန်းထုပ်ထာ ကမ္ဘာမှာ နံပတ် နစ်ရတယ်ဆိုတော့
အားကီးချမ်းသာမှာဘဲ။ ဆုတေသီး ဆရာကီး အဲဒီ့ ဘိန်းပိုက်စံတွေဘယ်ရောက်သွားသလည်း ဆက်ရေးပါဦးနော် – – –
ဥပိုင်က စစ်ဗိုလ်ကီးတွေ ဆက်လက်ပြီး စောက်စား စားနိုင်ကြပါစေ၊ မေတ္တာ စောက်တနာဖြင့် – အကီး။
Mr. W Myint on December 3, 2012 at 1:59 am
Now Our Myanmar becomes democracy government.All of the people will concentrate on these monopolized organization without paying the legal commercial tax, sales tax, income tax & etc.How many years our people were suffering & who are enjoying the illegal benefits of fruits of unlawful existing enterprises.Not only this so called Holding Companies but also we have pointed out the other huge business organizations jointly together with them to avoid the taxes to be paid to the Government to achieve for the implementation & welfare of the country. Try to push to Our Auditor General who could audit the misuses & misappropriation of the Ministries.